Waxaa Malinti Labad Xiran Wadoyinka Waweyn Ee Magalada B/weyne Ee Xarunta Gobalka Hiiraan – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaWaxaa Malinti Labad Xiran Wadoyinka Waweyn Ee Magalada B/weyne Ee Xarunta Gobalka Hiiraan
Waxaa maalintii labaad xiran inta badan ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka Magaalada B/weyne kadib markii maleeshiyo beeleed ka careysan dilka sarkaal u shaqeynayay Qaramada Midoobay ay xirteen wadooyinka magaalada.
Xafiisyada hay’adaha samafalka iyo xarumaha waxbarashada ayaa albaabada u laaban iyadoo wadooyinka magaalada ay taagtaagan yihiin dadka magaalada iyagoo ka wardhowraya xallinta khilaafka ka jiro Maglada B/weyne Ee Xarunta Gobalka Hiiraan.
Waxaa weli ka socda magaalada dadaalo ay ku doonayaan odayaasha dhaqanka in ay ku xaliyaan khilaafka ka dhashay dilka Allaha u naxariistee Mahdi Xuseen Shiikhaal oo la aaminsan yahay in ay dileen ciidamo ka tirsan dowlada.
Hase yeeshee wasiirka Amniga Qaranka C/risaaq Cumar Maxamed oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa u magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo baaritaan ku sameeya dilka loo geystey sarkaal u shaqeynayay hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan miinooyinka Mine Action.
Wasiirka oo ka hadlay dilka ayaa tilmaamay iney dilkaasi geysteen rag dhallinyaro ah oo sida uu sheegay ay ku jiraan gacanta ciidamada ammaanka, islamarkaana sharciga la horgeyndoono.
Xubnaha guddigan uu magacaabay wasiirka amniga iyo siyaasiyiin kale oo doonaya in ay gacan ka geystaan xalinta khilaafka ayaa lagu wadaa in ay gaaraan magaalada B/weyne Ee Xarunta Gobolka Hiiraan.